IOS အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ Application ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BlurMe! – AsiaApps
December 21, 2017 December 27, 2017 WilliamApp News / ReviewsNo Comment on IOS အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ Application ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BlurMe!
ဒီ Application လေးကတော့ App Store ပေါ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်ကမှရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ BlurMe ကိုတော့ မိမိဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို Blur လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင်ဖုန်း Wallpaper ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီး လှလှလေးထားချင်သူတွေ/ ဓာတ်ပုံတွေကို Blur လုပ်ရတာဝါသနာပါတဲ့လူတွေ အတွက်တော့ တကယ်သင့်တော်တဲ့ Application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်း Wallpaper ကြီးကိုအနည်းငယ် Blur လိုက်ခြင်းဖြင့် မြင်တွေ့ရတဲ့လူတွေအဖို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်နေမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။ မိမိ Blur လုပ်တဲ့နေရာမှာ အတိုးအလျော့လုပ်နိုင်တဲ့ Option ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Blur လုပ်ထားတဲ့ ပုံကိုအရောင်အတိုးအလျော့လုပ်နိုင်တဲ့ Option လည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။
Application ထဲဝင်လိုက်ရင် Load Image နဲ့ Share Image ဆိုပြီးနှစ်ခုသာတွေ့ရမှာပါ။ Load Image ကတော့ မိမိ Blur လုပ်ချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ Wallpaper တွေကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ Share Image ကတော့ မိမိ Blur လုပ်ပြီးတဲ့ Image ကို ရှယ်နိုင်တဲ့နေရာပါ။ အသုံးပြုပုံတွေကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် အရမ်းကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
16MB သာရှိတဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် အလွယ်တကူ Download ရယူနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ App Store တစ်ခုတည်းမှာသာရရှိနိုင်ဉီးမှာပါ။
Source : BlurMe